SONSAF | Dalladaha SONSAF iyo NAGAAD ayaa munaasibad soo dhawayn ah u qabtay dumarka iyo dadka la haybsooco ee musharrixiinta ah.
Dalladaha SONSAF iyo NAGAAD ayaa munaasibad soo dhawayn ah u qabtay dumarka iyo dadka la haybsooco ee musharrixiinta ah.
Munaasibad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay iska kaashadeen dalladda ururrada bulshada rayidka ah ee SONSAF iyo dalladda ay ku midooben haweenka Somaliland ee NAGAAD ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa.
Ugu horrayn waxa madasha ka hadlay guddoomiyaha dalladda SONSAF mudane Anwar Cabdiraxmaan Warsame, isaga oo carrabka ku adkeeyay inay musharrixiinta haweenka iyo beelaha gabooye hiil iyo hooba la garab taagan yihiin sidii ay ugu soo bixi lahaayeen doorashooyinka isku sidkan ee soo socda.
Guddoomiyaha guddiDa doorashooyinka qarank Somaliland mudane C/rashiid Maxamuud Cali riyo raac oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in doorashada in la soo baxo iyo in la dhacaa aanay muhiim ahayn balse inay han yeeshaan iyo dhiirranaan ay ku soo isaagaan tartanka ay tahay arrinta muhiimka ah.
Guddoomiyaha dalladda NAGAAD Ismahaan Cabdisalaan ayaa iyaduna madasha ka jeedisay hadallo iskugu jira dhiirri galin iyo waano ku socota musharrixiinta dumarka ah, waxaanay hoosta ka xarriiqday in halgankii dumarku wali socdo, NAGAAD ahaanna ay illaa sannadkii hore ku hawllanaayeen sidii ay dumarka ugu fududayn lahaayeen inay isa soo sharraxaan iyaga oo la kulmay odayaal dhaqameedka iyo cid kasta oo ka qayb qaadanaysay inay soo baxaan dumarku.
Cadnaan Hagoog oo ka socday Midowga Yurub ayaa isna u mahadnaqay dalladAHA SONSAF iyo NAGAAD siday ay uga shaqayaan arrimaha dumarka, isaga oo sidoo kale u hambalyeeyay haweenka musharrixiinta ah iyo beelaha laga tiro badan yahay.
Waxa iyaguna kale oo madasha ka hadlay Kaltuun sheekha Xasan oo ka tirsan guddida doorashooyinka ayaa iyaduna taageero iyo niyad wanaag u muujisay dumarka musharrixiinta ah, iyo xubno ka kala socday saddexdas xisbi qaran oo dhammaantooda u hambalyeeyay dumarka iyo beelaha la haybsooco